URama nguyena ukaputeni weChiefs: Gavin Hunt - Impempe
URama nguyena ukaputeni weChiefs: Gavin Hunt
February 18, 2021 February 18, 2021 Impempe.com
URamahlwe Mphahlele uyena osengukaputeni weKaizer Chiefs ngokusho kukaGavin Hunt
Ngeke asolwe kakhulu ngokuthi uphoxekile umqeqeshi weKaizer Chiefs, uGavin Hunt, ophinde wazithola enwaya ikhanda ngemuva kokushaywa AmaZulu FC ngo 2-1 emdlalweni weDStv Premiership ngoLwesibili.
“Ushintsho emizuzwini yokuqala yomdlalo alusizi kakhulu. Nokho kumele ngivume ukuthi sibe namathuba amahle ngesiwombe sokuqala, nokho ngaphambi kokuthi kuphele isiwombe sidedele igoli. Sizamile ukubuya kodwa senza elinye iphutha futhi. Ngiphoxekile kakhulu,” kusho uHunt.
AmaZulu iwona abone inethi kuqala ngegoli lika-Augustine Mulenga ngaphambi kokuthi ziye ekhefini. IChiefs ithole iphenathi eshaywe nguLeonardo Castro kodwa kwagcina kugiye Usuthu ngegoli elishaywe uLehlohonolo Majoro sekuzophela umdlalo.
Uvumile uHunt ukuthi akuhambi kahle ezintini zeChiefs selokhu efikile njengoba u-Itumeleng Khune enza amaphutha kulandelana.
“Kona kuyinto engihluphayo selokhu ngifikile. Yinto okumele sisebenze kuyona futhi ngethemba ukuthi izolunga. Kona kuyinto engikhathazekile ngayo kakhulu,” kusho uHunt.
Ukhuluma kanjena nje uHunt uKhune uphinde wenza iphutha ikakhulukazi egolini lesibili lapho ephume khona ezama ukuxhimfa ibhola kodwa lagcina liphelele kuMajoro walibeka phakathi.
UHunt uphinde wacacisa indaba yokuthi ngubani ukaputeni njengoba ngoLwesithathu ibhande beligqokwe uRamahlwe Mphahlele kodwa uKhune ekhona enkundleni.
“URama nguyena ukaputeni kodwa ubengekho isikhathi eside. URama nguyena ukaputeni,” uphinde kabili kanje uHunt.
“Ezintini besilokhu sinenkinga kodwa ngicabange ukuthi yisikhathi sokubuyisa uKhune, sizame.”
Mayelana nokufaka aphinde akhiphe uLebogang Manyama uthe: “Ubengasiniki okutheni kule ndawo abeyidlala yikho senze ushintsho. Yinto eyenzekayo uma kuqhubeka umdlalo.”
UManyama ungene ngesiwombe sokuqala ngemuva kokulimala kukaHappy Mashiane. Nokho uphinde wakhishwa ngesiwombe sesibili kwafakwa uCastro.
IChiefs izobhekana neSuperSport United emdlalweni weligi ngempelasonto.
Email: editor@impempe.com Twitter: @impempe_com
Previous Previous post: ISundowns ifuna ukubutha zonke izicoco edlala kuzo, kusho uLyle Lakay
Next Next post: Asikapholi isilonda sokushwebisa iTS Galaxy kwiNedbank Cup kuMlungisi Mbunjana